United Airlines handroaka mpiasa 593 noho ny fandavany vaksiny
Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » United Airlines handroaka mpiasa 593 noho ny fandavany vaksiny
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao momba ny fahasalamana • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Fitaterana • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Etazonia Vaovao Vaovao
United Airlines no mpitatitra amerikana voalohany nametraka mandat ny vaksinin'ny COVID-19 tamin'ny mpiasany tamin'ny voalohan'ny volana aogositra. Ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka amerikana hafa dia tsy sahy nanara-dia, fa nifindra mba hampitsahatra ny fiarovana ny karama ho an'ireo mpiasa tsy voamarina fa voan'ny virus.
Ny mpiasan'ny United Airlines 67,000 XNUMX amerikana dia nasaina nanome porofo momba ny vaksiny hatramin'ny alatsinainy lasa teo.
Na izany aza, ny United Airlines dia hamela ireo mpiasa hitazona ny asany raha nanao vaksiny izy ireo saingy tsy nahavita nanaporofo tamin'ny fe-potoana farany.
Ny mpiasa tsy vita volo dia manana herinandro maromaro eo ambanin'ny lalàna momba ny fandroahana ny sendika amin'izao fotoana izao mba hitsaboana azy ireo raha te hijanona izy ireo.
Ny United Airlines dia nanome baiko ny mpiasan'ny 67,000 amerikana mba hanome porofo ny fanaovana vaksiny amin'ny alatsinainy lasa teo.
Mpiasa orinasa 593 izao no miatrika famotsoran-keloka taorian'ny tsy fanarahana ny politikan'ny vaksiny COVID-19 an'ny zotram-piaramanidina.
"Fanapahan-kevitra sarotra tokoa izany fa ny fitazonana ny ekipanay no laharam-pahamehana voalohany hatrizay," hoy ny lehiben'ny mpitantana ny seranam-piaramanidina Scott Kirby sy ny filoha Brett Hart tamin'ny memo ho an'ny mpiasa.
Raha ny ankamaroan'ny United Airlines'Nanaiky ny politikan'ny orinasa ny mpiasa, mpiasa 593 no tsy nety nokasihina ary tsy nangataka fanavahana noho ny antony ara-pivavahana na ara-pitsaboana izay napetraky ny orinasa raha tsy vita vaksiny.
"Ny antony nitakiantsika ny vaksininy ho an'ny mpiasa amerikanina rehetra any Etazonia dia tsotra - hitandrovana ny olontsika - ary ny marina dia izao: milamina kokoa ny tsirairay rehefa vaksiny ny tsirairay, ary miasa ny takiana vaksiny," hoy i United tao amin'ny memo.
United Airlines na izany aza, hamela ireo mpiasa hijanona amin'ny asany raha nanao vaksiny izy ireo saingy tsy nahavita nanaporofo tamin'ny fe-potoana farany, na raha ho voafitaka izy ireo alohan'ny hahatongavan'ny fanapahan-kevitra ofisialy momba ny fandroahana.
Midika izany fa ny mpiasa tsy vita volo dia manana herinandro maromaro na volana maromaro eo ambanin'ny lalàna momba ny fandroahana ny sendika amin'izao fotoana izao raha te hijanona.
Nanambara ny United Airlines tamin'ny fiandohan'ity volana ity fa hametraka ireo mpiasa tsy andoavana vaksiny amin'ny fialantsasatra tsy voaloa na ara-pahasalamana manomboka ny 2 Oktobra. Nofoanana ilay drafitra taty aoriana taorian'ny fitoriana napetraky ny mpiasa enina izay nampiakatra ny fanapahan-kevitra. Mpiasa 2,000 eo ho eo no nangataka izany fanafahana izany.
United Airlines no mpitatitra amerikana voalohany nametraka mandat ny vaksinin'ny COVID-19 tamin'ny mpiasany tamin'ny voalohan'ny volana aogositra. Ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka amerikana hafa dia tsy sahy nanara-dia, fa nifindra mba hampitsahatra ny fiarovana ny karama ho an'ireo mpiasa tsy voamarina fa voan'ny virus. Miorina any Georgia Delta Air-dalana, nikapoka vola $ 200 isam-bolana ho an'ny mpiasa mbola tsy vita vaksiny.
Toy ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka maro hafa, i United dia voadona mafy noho ny fameperana fitsangatsangana vokatry ny areti-mandringana, ka voatery nanangona mpiasa 36,000 XNUMX teo ho eo izy tamin'ny faran'ny krizy tamin'ny taon-dasa.